4 Train Travel Nga Njem dị mkpa Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 4 Train Travel Nga Njem dị mkpa Na Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 21/02/2020)
Otu n'ime ihe ndị kasị akpali akpali banyere njem na Europe bụ na i nwere ike inwe na e jiri ụgbọ okporo ígwè n'ebe nile. Ọ bụ ihe kasị zuru ebe nile pụtara nke iga na ọtụtụ ndị mmadụ mmasị aka njem Afrika. Ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ ụfọdụ tupu ha na-ekpebi iri a ụgbọ okporo ígwè, tupu njem dị mkpa dị ka ebe ka m zụrụ tiketi? Olee otú m ịlele schedules? ike m agafe site n'otu mba ọzọ? Gịnị bụ n'abalị ụgbọ oloko dị ka?
Lee ndị tupu njem dị mkpa i nwere mara:
Schedules na Ahịa nke European Ụgbọ oloko
Ọ bụ ezie na ihe niile nke Europe na-jikọrọ site a nnọọ ọtụtụ ụgbọ okporo ígwè netwọk ọ bụla na mba nwere ya ụgbọ okporo ígwè ụlọ ọrụ na, Ya mere, ya website na schedules na udu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga ụgbọ okporo ígwè n'ime otu mba, enweghị agafe ọ bụla ókè, ọ ka na-atụ aro na i gaa ozugbo na Zọpụta A Train dị ka ị ga-eme na flights ka Skyscanner. Ọ bụrụ na ị na-amaghị ihe ọ bụ, Google ga-enye gị azịza. Fọrọ nke nta niile weebụsaịtị nwere English version, ya mere, ọ dị mfe ịnyagharịa na ịlele schedules. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga ụgbọ okporo ígwè site n'otu mba ọzọ otù (mgbe niile n'ime Europe) ị kwesịrị ị na-achọkwa ụzọ na ihe ngwa ka Save A Train.
Olee na Mgbe Zụrụ Tickets?
Otu nke tupu njem dị mkpa bụ maa tiketi. Ụfọdụ ụgbọ okporo ígwè amaokwu (karịsịa ndị nke oke ọsọ na ndị na jikọọ n'isi obodo ma ọ bụ nnukwu obodo) agbasaghị ebili na price mgbe ọpụpụ ụbọchị na-eru nso; e nwere ndị ọzọ (obodo ụgbọ oloko na ndị na-ejikọta dị nso n'obodo) na mgbe niile na-otu price. Ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị si isi obodo na isi obodo, ọ kasị mma ịzụta tiketi a izu ole na ole tupu na nke kacha mma price. Ọ bụrụ na ị ịzụta tiketi site na ngwa ọdịnala (ọtụtụ European ụgbọ okporo ígwè ụlọ ọrụ nwere onwe ha ngwa oke), ị ga-enweta electronic tiketi na a QR code i nwere ike na-egosi onye na-akwọ site na ihuenyo nke ekwentị gị, otú ị na-adịghị na-ebipụta ha.
London na Lille Ụgbọ oloko
London ka Bordeaux Ụgbọ oloko
The ezi ihe banyere njem ụgbọ okporo ígwè bụ na ụlọ ọrụ na-na-na center nke obodo na-adị mfe inweta site Metro, ụgbọ ala ma ọ bụ ụkwụ. Ị na-adịghị na-aga otu awa na-aga ọdụ ụgbọelu (gwụla ma ị na na na na mpụga obodo, ọ bụ ezie na n'ozuzu, ọ dịghị mgbe na-ewe ogologo oge). Ọ bụrụ na ị njem na obere akpa, ị nwere ike ịga site ọha iga. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ loaded, ma eleghị anya, a taxi bụ ndị kasị mma nhọrọ. Ọ na-adịghị na-afụ ụfụ na-ekwu na ọ: e nwere n'obodo ahụ nwere ọtụtụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè (ọmụmaatụ, Paris) ka mgbe niile ijide ihe ụgbọ oloko gị departs si. Mgbe ụfọdụ, o nwere ike ime ka ị na-agafeta si otu ebe ọzọ.
Ịbịa of Ụgbọ oloko na Europe
European ụgbọ oloko wezuga kpọmkwem nkeji (ma na e nwere a na-egbu oge, n'ihi na ụfọdụ Ihu Igwe kpatara). Na-na ọdụ banyere 15-20 nkeji tupu bụ mgbe otu n'ime tupu njem dị mkpa. Buru n'uche na e nwere ụgbọ oloko na na-nnọọ ogologo ma na mgbe ụfọdụ, ị ga-eje ije a ọtụtụ na-esi na njedebe nke n'elu ikpo okwu. The-akwụsị n'etiti otu obodo na ọzọ adịghị na-emekarị adịru karịa a nkeji ole na ole.
Nke a bụ a obere ma na-enye aka na ndu na tupu njem dị mkpa maka ụgbọ okporo ígwè eme njem na Europe na ihe i nwere mara tupu ị na-ekpebi na-otu. Anyị na-atụ na ahụmahụ ị na-erite ga-bara oké uru.
Tinye Save-A-Train ka akwụkwọ gị ụgbọ okporo ígwè tiketi ọ bụla na-aga n'ebe 3 nkeji, na ndị dị ọnụ ala gbaa ụgbọ okporo ígwè udu na napụla asọ anyị oyi ntinye akwụkwọ ụgwọ!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F4-train-pre-trip-essentials-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#ibu #packing europeantravel Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem
Ihe mara Mgbe akwọ ụgbọala na Europe
Ejegharị ejegharị na A Disability Na Europe Mere Easy